Waa maxay Xog-waraysi? Waa maxay faa'iidooyinka Istaraatiijiyada macluumaadka?
Marka aad dhex rogto baraha bulshada ama mareegaha, waxa aad inta badan iman doontaa sawiro macluumaad oo si qurux badan loo nashqadeeyey kuwaas oo siinaya dulmar mawduuc ah ama u jajabinaya tiro badan oo xog ah oo garaaf ah oo qurux badan, hal garaaf ah, kaas oo ku dhex jira maqaalka. Xaqiiqdu waxay tahay… taageerayaasha, daawadayaasha, iyo akhristayaasha ayaa jecel iyaga. Qeexida infographic waa uun taas…
Waa maxay Xog-waraysi?
Infographics waa sawiro muuqaal ah oo xogta, xogta, ama aqoonta loogu talagalay in lagu soo bandhigo macluumaadka si degdeg ah oo cad. Waxay wanaajin karaan garaadka iyagoo isticmaalaya garaafyada si ay u wanaajiyaan nidaamka aragga aadanaha awoodda uu u leeyahay inuu arko qaababka iyo isbeddellada.
Waa maxay sababta loo maal galiyo macluumaadka?
Infographics waa wax gaar ah, aad caan ah marka ay timaado suuqgeynta nuxurka, oo sii tiro faa'iidooyin ah shirkadda iyaga la wadaagaysa:
Copyright - Si ka duwan waxyaabaha kale, infographics ayaa loo qaabeeyey oo loo dhisay in la wadaago. Qoraal fudud oo ku socda daabacaadaha, saxafiyiinta, saameeyayaasha, iyo akhristayaasha in ay ku dari karaan oo ay wadaagi karaan ilaa inta ay ku soo celiyaan goobtaada oo ay bixiyaan credit waa dhaqan caadi ah.
Aqoonsiga – Infographic si fiican loo nashqadeeyey ayaa si fudud u dheefshiiday oo u fahmayaa akhristuhu. Waa fursad aad u wanaagsan shirkaddaada si ay u burburiso nidaam ama mawduuc kakan oo ay u fududayso in la fahmo… kaliya waxay u baahan tahay xoogaa dadaal ah.
Wadaagista – Sababtoo ah waa hal fayl, way fududahay in la koobiyeeyo ama laga tixraaco intarneedka oo dhan. Tani waxay sahlaysaa in la wadaago… iyo infographic weyn xitaa wuxuu geli karaa fayras. Hal tilmaan oo tan ah - hubi inaad cadaadiso xogta macluumaadka si aanay ugu baahnayn tiro baaxad leh si loo soo dejiyo oo loo eego.
Saameeyayaasha - Goobaha sida Martech Zone kuwaas oo ah jacaylka saamaynta leh ee wadaaga macluumaadka sababtoo ah waxay nagu badbaadisaa waqti aad u badan oo ku saabsan horumarinta nuxurka.
Raadinta Darajada - Sida goobuhu u wadaagaan oo ay ugu xidhmaan macluumaadkaaga, waxaad ururinaysaa backlinks aadka u khuseeya mawduuca… badiyaa cirka isku shareeraysa darajooyinkaaga mawduuca xogtu ka hadlayso.
Soocelinta - Infographics inta badan waa ururinta walxo kala duwan, markaa jabinta macluumaadka waxay ku siin kartaa daraasiin kale oo ka kooban bandhigyo, waraaqo cadcad, hal xaashi, ama cusbooneysiinta warbaahinta bulshada.
Tallaabooyinka lagu Sameynayo Xog-warbixineed
Waxaan hadda la shaqaynaynaa macmiil leh ganacsi cusub, goob cusub, oo aanu isku dayeyno in aanu dhisno wacyiga, maamulka, iyo dib u xidhidhiyaha. Infographic ayaa tan xal ugu fiican u ah, markaa hadda waa la soo saarayaa. Waa kan habkayaga ku saabsan horumarinta macluumaadka macluumaadka ee macmiilka:
Cilmi-Keyword – Waxa aanu aqoonsanay tiro kelmadood oo muhiim ah oo aan ahayn tartan aad u adag oo aanu rabno in aanu u wadno darajada goobtooda.
habboonaanta - Waxaanu baadhnay macaamiishooda hadda si aan u hubinno in mawduuca macluumaadka uu yahay mid ay dhagaystayaashooda ay xiiseynayaan.
Research - Waxaan aqoonsannay ilaha cilmi-baarista labaad (dhinac saddexaad) oo aan ku dari karno gudaha macluumaadka. Cilmi-baarista aasaasiga ah waa mid aad u fiican, sidoo kale, laakiin waxay u baahan doontaa wakhti iyo miisaaniyad ka badan inta macaamilku ku qanacsan yahay.
Gaaritaanka - Waxaan aqoonsannay kuwa saameeya iyo mareegaha daabacaadda macluumaadka waqtiyadii hore kuwaas oo noqon lahaa bartilmaameedyo waaweyn si kor loogu qaado xog-oggolaanshahayaga cusub sidoo kale.
U bandhigidda – Waxa aanu ku soo ururinay hab-dhaqameedka xog-ururinta si aanu ula socono dhammaan taraafikada iyo beddelka infographic-ku soo saaray.
Copywriting – Waxa aanu codsanay caawimada daabacaade weyn oo ku takhasusay cinwaanada gaagaaban, dareenka soo jiidashada iyo koobiga kooban.
brandingeksperten - Waxaan soo saarnay garaafyada dhabta ah anagoo adeegsanayna astaanta shirkadda cusub si aan u wadno wacyiga sumadda.
Kala-baxyada - Waxaan ka shaqeynay dhowr jeer si aan u hubinno nuqulka, sawirada, iyo macluumaadka infographic ay ahaayeen kuwo sax ah, khalad ah, iyo macmiilku wuu ku qanacsan yahay.
Warbaahinta bulshada - Waxaanu jebinay walxaha garaafyada si shirkadu ay u hesho taxane cusub oo warbaahinta bulshada ah si kor loogu qaado xogta.
saraysiinta - Waxaan soo saarnay bogga daabacaadda, si aad ah loogu habeeyay raadinta nuqul dheer si loo hubiyo in si wanaagsan loo calaamadeeyay waxaanan ku darnay raadinta ereyga muhiimka ah ee goob raadintayada.
Wadaagista - Waxaan ku darnay badhamada wadaagga bulshada si ay akhristayaasha ugu wadaagaan xog-ururinta muuqaalkooda bulsheed.
Gudbinta – Shirkado aad u badan ayaa ula dhaqma infographics sida hal oo la sameeyay… cusboonaysiinta, dib-u-daabacaadda, iyo dib-u-cusboonaysiinta infographic weyn si joogto ah waa istiraatiijiyad suuqgeyneed oo weyn! Uma baahnid inaad eber ka bilowdo xog kasta.
In kasta oo istaraatiijiyadda macluumaadka ay u baahan karto maalgashi weyn, natiijadu waxay had iyo jeer u ahayd macaamiisheena si wanaagsan si aan u sii wadno horumarinta iyaga oo qayb ka ah nuxurka guud iyo istaraatiijiyada warbaahinta bulshada. Waxaan ku kala soocnaa nafteena warshadaha anagoo kaliya samaynin tiro cilmi baaris ah oo aan ka shaqeyno si aan u horumarino macluumaadka si fiican, laakiin sidoo kale waxaan ku soo celinaa dhammaan faylasha asaasiga ah ee macaamiishayada si ay dib ugu soo celiyaan meelo kale dadaalkooda suuqgeyneed.
Hel Xigasho Infographic ah
Kani waa macluumaad da'weyn oo ka yimid Magnetismka Macaamiisha laakiin waxay soo bandhigaysaa dhammaan faa'iidooyinka xog-ururinta iyo xeeladda la socota. Toban sano ka dib waxaan wali la wadaageynaa macluumaadka, wacyigelinta wadista wakaaladooda, oo aan siinayno xiriir aad u wanaagsan iyaga!
Tags: istiraatiijiyadda contentmagnetism macaamiishahighbridgeinfographicnaqshad sameyntanaqshadeeye infographicmacluumaad jaantus ahdarajo keywordcilmi-baarista muhiimka ahdarajeeyosoocelinta waxyaabahawarbaahinta bulshadawadaagida warbaahinta bulshadawadaagista bulshadaqiimaha infographicmaadada fayraskaaragtidanuxurka muuqaal ahaanwaa maxay infographic